SCORPIO WEEKLY အကြားအမြင် TAROT ကိုဖတ်ရှု 29th မေလ 2017: Stop နှင့်အနံ့ဟာနှင်းဆီပန်း - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > SCORPIO WEEKLY အကြားအမြင် TAROT ကိုဖတ်ရှု 29th မေလ 2017: အနှင်းဆီပန်း Stop နှင့်အနံ့
Megan မေလ 29, 2017 ဗီဒီယိုများTagged ကုံ, aries, အကောင်းဆုံးအဘိဥာဏ်, အကောင်းဆုံး tarot, ကင်ဆာ, capricorn, Gemini, ကျွန်မဖတ်ပါ, ပေါင်ချိန်, မန်နီးဖက်စ်, Pisces, အဘိဥာဏ်, r ..., Sagittarius, scorpio, Taurus, လျှို့ဝှက်ချက်, အပတ်စဉ် tarot3 မှတ်ချက် SCORPIO WEEKLY အကြားအမြင် TAROT ကိုဖတ်ရှု 29th မေလ 2017 အပေါ်: အနှင်းဆီပန်း Stop နှင့်အနံ့
နေ့စဉ် tarot, အပတ်စဉ် tarot, လစဉ် tarot, tarot ဖတ်, tarot စာဖတ်သူကို,
မေလ 29, 2017 မှာ 12: 50 နံနက်
ငါသည်ငါ့ ASC ဖတ် SAG နှင့်အတူညှိပိုမိုဖတ်နေရှာတွေ့ပေမယ့်ကျွန်မအတော်လေးဟာမနာလို Vibe နားလည်
ဒါ့အပြင်ငါ့အလိုရှိသမျှပစ္စည်းပစ္စယသေတ္တာထဲမှာတည်သည်သေတ္တာများနှင့်အတူ resonate! ထွက်လှိမ့်ဖို့အဆင်သင့်! Elsewhere're
တန်ယာသင်တို့ကိုငါကတစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ခွဲထားခဲ့သည်ရကျနော်ကျိန်းသေကြောင်း crappy ချောင်းဆိုး မှလွဲ. သင့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းကိုချစ်ကိုသိခြင်းထက်သင်ပိုမိုကိုချစ်
Evalynn Fordawinn says:
ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ဗီဒီယို wow Nice စစ်မှန်တဲ့ထွန်းလင်းတွေ့မြင်😀
RACHYBABEZ * Frame က says:
awww Tan က scorpio ဤအမှုသည်ငါ့ကြောင့် thru ခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်သောစကားကိုနားထောင် sooo မင်္ဂလာဘုန်းကြီးခံစားရလုပ် ... ဎကျွန်မဦးဒီမှာ gab ၏တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေး Lil ကြက်သား loool ဆုကြေးဇူးကိုတန်ယာ☺ ?? က x ma am..Thank မင်္ဂလာရှိ၏မြင့်တက်